Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Saint Vincent sy ny Grenadines vaovao momba ny dia » Ny fivoriana Pan-Karaiba dia manazava ny Vondrona Indiana Atsinanana any St.Vincent » Page 2
Junior Bacchus Hoy izy: “Ny raibeko, Ram Balak Singh, manam-pahaizana ara-pinoana ary pundit dia nanomboka nanome lesona Hindi tao amin'ny faritr'i Argyle, saingy tsy naharitra ela izany. Tamin'ny taona 1960, ny raiko, Andriamatoa Donelly Bacchus sy ireo hafa toa an'i Dr Gideon Cordice, dia nanandrana nanangana fikambanan-kolontsaina indiana ihany koa.
“Fikambanana iray, ny SVG Indian Heritage Foundation dia natomboka tao an-tranon'i Osley Baptiste tao amin'ny Indian Bay tamin'ny fotoana nihaonana tamina fianakaviana maromaro.
“Nanomboka tamin'izay, ny governemanta SVG dia namoaka lalàna iray hanekena ny Andron'ny fahatongavan'i India sy ny andron'ny vakoky indianina. Ny Foundation dia nametraka fifandraisana amin'ny Governemanta India sy ny fikambanana isam-paritra.
“Voatendry ho konsulà manamboninahitry ny Repoblikan'i India ho an'i St.Vincent sy Grenadines koa aho.
"Ny sasany amin'ireo zava-bitan'ny Foundation hafa dia misy ny fitsidihana sy fampisehoana ara-kolontsaina any an-tsekoly, fifampiraharahana amin'ny governemanta amin'ny anaran'ny vondrom-piarahamonina Indiana, fananganana tranokala ary forum amin'ny Internet, fampiantranoana tompon'andraikitra Indiana ao amin'ny SVG, kilasy yoga isan-taona ary fandraisana anjara amin'ny hetsika any India sy ny faritra.
“Mahatsapa aho fa ny fikambanana indiana isam-paritra dia mila miara-miasa akaiky kokoa hahazoana synergie bebe kokoa.”